KwaGlibc bakhansele ukudluliswa okuyimpoqo kwamalungelo ekhodi ku-FSF | Kusuka kuLinux
EGlibc bakhansele ukudluliswa okuyimpoqo kwamalungelo ekhodi ku-FSF
Okuhle | 30/07/2021 10:24 | Izaziso
Abathuthukisi be-Glibc bakhishwe muva nje ngokusebenzisa uhlu lwamakheli abawenzile ezinye izinguquko ezithile emithethweni yokwamukela izinguquko nokudlulisa i-copyright, lapho ukudluliswa okuyimpoqo kwamalungelo empahla ngaphezulu kwekhodi ku-Open Source Foundation kukhanseliwe.
Ngokufanisa nezinguquko ezamukelwa phambilini kuphrojekthi ye-GCC, ukusayinwa kwesivumelwano se-CLA neFree Software Foundation eGlibc kudluliselwe esigabeni semisebenzi yokuzikhethela eyenziwe ngokucela konjiniyela.
Ngezinguquko ezintsha ezenziwe kumthetho, Ukwamukelwa kwepatch manje kuzovunyelwa ngaphandle kokudlulisela amalungelo ku-FOSS Foundation, ngaphandle kwekhodi eyabelwe amanye amaphrojekthi we-GNU ngeGnulib.
Abanikeli abanesabelo se-copyright se-FSF abadingi ukushintsha noma yini. Abanikeli abafisa ukusebenzisa Isitifiketi Sonjiniyela kusuka ku- Umsuka  kufanele engeze umlayezo othi 'Usayinwe' kusiqinisekiso sakho.
Ikhodi eyabiwe namanye amaphakheji we-GNU nge-Gnulib izoqhubeka ukudinga ukwabiwa ku-FSF.
Ngaphezu kokudlulisa amalungelo empahla ku-Open Source Foundation, Onjiniyela banethuba lokuqinisekisa ilungelo lokudlulisela ikhodi kuphrojekthi ye-Glibc kusetshenziswa indlela yesitifiketi sonjiniyela wemvelaphi (DCO). Ngokuya nge-DCO, ukulandelela umbhali kwenziwa ngokunamathisela umugqa "Usayinwe ngu: igama lonjiniyela ne-imeyili" enguqulweni ngayinye.
Ngokunamathisela lesi siginesha esiqeshini, unjiniyela uqinisekisa ukuqanjwa kwayo mayelana nekhodi elidlulisiwe futhi wamukele ukusatshalaliswa kwayo njengengxenye yephrojekthi noma njengengxenye yekhodi ngaphansi kwelayisense yamahhala. Ngokungafani nezenzo zephrojekthi ye-GCC, isinqumo esiseGlibc asikhishwanga ngumkhandlu olawulayo ngaphezulu, kepha senziwa ngemuva kwengxoxo yokuqala nabobonke abamele umphakathi.
Ukukhanselwa kwesiginesha esiyimpoqo yesivumelwano ne-Open Source Foundation yenza lula kakhulu ukugibela kwabangenayo abasha entuthukweni futhi yenza iphrojekthi izimele ngokuthambekela kwe-Open Source Foundation. Yize ukusayinwa kwe-CLA yilabo ababambe iqhaza kudale kuphela ukuchitha isikhathi ngezinqubo ezingadingekile, ezinkampanini nakubasebenzi bezinkampani ezinkulu ukudluliswa kwamalungelo ku-STR Foundation kuhlotshaniswa nokubambezeleka okuningi nokuvunywa kwezomthetho, obekungaqedi ngaso sonke isikhathi ngempumelelo.
Ukwenqatshwa kokuphathwa okuphakathi kwamalungelo ekhodi futhi kuhlanganisa imigomo yelayisensi eyamukelwa ekuqaleni, njengoba ukushintsha ilayisense manje kudinga ukuthola imvume yomuntu ngamunye kunjiniyela ngamunye ongazange adlulisele amalungelo kuFree Software Foundation.
Nokho, Ikhodi ye-Glibc isenelayisense "LGPLv2.1 noma entsha", evumela ukufudukela kuzinguqulo ezintsha ze-LGPL ngaphandle kwemvume eyengeziwe. Njengoba amalungelo eningi lekhodi ehlala ezandleni zeFree Software Foundation, le nhlangano iyaqhubeka nokudlala indima yesiqinisekiso sokusatshalaliswa kwekhodi ye-Glibc kuphela ngaphansi kwamalayisense we-copyleft wamahhala.
Isibonelo, iFree Software Foundation ingavimba imizamo yokwethula ilayisense yokuhweba / yomibili noma ukwethulwa kwemikhiqizo evaliwe yokuphathelene ngesivumelwano esehlukile nabalobi bekhodi.
Phakathi kwamaphutha okushiywa kwabaphathi abaphakathi ikhodi yamalungelo, sekuqubuke ukudideka ekuxoxisaneni ngezinkinga zamalayisense. Uma phambilini zonke izimangalo zokwephulwa kwemibandela yelayisense zaxazululwa ngokuxhumana nenhlangano, manje umphumela wokwephulwa, kufaka phakathi okungahlosiwe, uba ongalindelekile futhi kudinga ukuvumelana nomhlanganyeli ngamunye.
Njengesibonelo, isimo nge-kernel ye-Linux, lapho abathuthukisi be-kernel ngamunye beqala isenzo somthetho, kufaka phakathi ngenhloso yokuzizuzela.
Izinguquko zomthetho ziqala ukusebenza ngo-Agasti 2 futhi zizothinta wonke amagatsha e-Glibc atholakalayo ukuze athuthukiswe, ekugcineni uma unentshisekelo yokwazi kabanzi ngakho, ungaxhumana nemininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » EGlibc bakhansele ukudluliswa okuyimpoqo kwamalungelo ekhodi ku-FSF
IPulseAudio15.0 ifika nezithuthukisi ze-Bluetooth, ukwesekwa, ukulungiswa, nokuningi
Julayi 2021: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kweSoftware yamahhala